Iza no tsara indrindra amin'ny fatana fikotranana ao an-dakozia?
Home / Blog / Iza no tsara indrindra amin'ny fatana fikotranana ao an-dakozia?
2020 / 12 / 03 FisokajianaBlog 5927 0
Ny faucet manara-penitra dia tsy tokony ho maharitra sy mora diovina fotsiny, fa tsara sy miasa ihany koa.
Ireto faucets ao an-dakozia manaraka ireto dia manasongadina ireo singa vaovao farany sy famaranana kanto hahatratrarana ireo fepetra henjana ireo.
Moen Arbor Motionsense Dual Sensor Tsy Mifandray Tanana tokana Faucet avo lenta ambony ambany miaraka amin'ny Reflective Function, Chrome Plated (7594EC).
MotionSense dia manolotra fahafaha-miavaka amin'ny tanana tsy manam-paharoa, mitaona ny fikorianan'ny rano amin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana tsotra amin'ny alàlan'ny sensor roa mandroso eo an-tampon'ny sy ao ambanin'ny faucet.
Ny hoe tsy misy tanana dia midika hoe tsy mila fanadiovana bebe kokoa ny faucets anao ary manampy anao hifehezana ny fihanaky ny bakteria.
Fandidiana tsy manam-petra
Ny rafitra Reflex dia manararaotra ny halavan'ny fantsom-panafody 68-inch ho an'ny fanodinana tsy manam-petra, manamora ny asanao isan'andro.
Hiverina ho azy amin'ny toerany tany am-boalohany ny fantsona ho an'ny docking milamina sy azo antoka.
Fametrahana haingana sy mora
Ny rafitra fametrahana an'i Duralock haingana-mifandray vaovao an'i Moen dia mahatonga ny fametrahana fantsona haingana sy mora, tsy mila fitaovana.
Volana vita amin'ny vy tsy mahazaka tasy
Ity faucet Arbor ity dia misy famaranana vy tsy mahazaka tasy izay manohitra ny dian-tanan'ny rantsantanana sy rano mba hahitana madio kokoa ao an-dakozia.
Fomba fitifirana roa ho an'ny fiasa roa
Manome anao «mode spray» roa ny lever Arbor mba handrakofana ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanasana lovia ka hatramin'ny fikosehana mavesatra.
Delta 9178-AR-DST Faucet milentika ao an-dakozia
Ny valizy roa na seranana roa dia manolotra fitambarana tonga lafatra amin'ny fomba nentim-paharazana sy ny fampiasa maoderina.
Fampisehoana tsy misy fivoahana ao anatin'izany ny teknolojia diamondra.
Ny mekanika magnaTite docking tsy manam-paharoa dia mitazona tsara ny tongony.
Manafoana ny famoahana
Ny fantson-drano iray sy ny valizy voahidy diamondra.
Manasongadina kapila vita amin'ny seramera misy diamondra.
Tsy mila fanosorana, fanesorana ny fiakarana tombo-kase.
Fandidiana amin'ny tanana (misy tantana) ary fiasa Touch2O.
Ny tantana dia manitsy ny fikorianan'ny rano sy ny mari-pana ambonin'ny tokotanin-tsambo.
20 ″ Fanitarana fantsona
Manova loko ny jiro hanairana anao amin'ny hafanan'ny rano ary hampihena ny mety hisian'ny lozam-pifamoivoizana na tsy mahazo aina.
Ny jiro LED dia manondro koa rehefa mila soloina ny bateria.
Safidy telo farany
Hita amin'ny chrome, vy tsy matevina amin'ny arctic ary varahina.
The Moen Arbor High Arc Misintona-Down Faucet an-dakozia.
Moen Arbor Single Gauchet avo lenta an-dakozia avo lenta miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony, Splashproof (7594SRS).
Fanadiovana Dynamic Technology Spray
Sasao haingana kokoa ny lovia raha mampihena ny rano sisa tavela ao anaty sy ny manodidina.
Ny famolavolana radius avo dia manome ny haavony sy ny elanelany mba hamenoana sy hanadiovana vilany lehibe, ary ny rafi-panafody misintona dia manome fihoaram-pefy tsy voafetra rehefa manasa na manasa lovia sy falika amin'ny habe rehetra.
Rafitra fitaratra mitete-midina
Araraoty ny halavan'ny fantsom-boaloboka 68 santimetatra ho an'ny fanodinana tsy manam-petra sy ny fahamoran'ny asanao isan'andro.
Famafazana adidy mavesatra sy madio madio
Ny Power Clean dia manatsara ny fikorianan'ny rano ho an'ny fanadiovana andraikitra mavesatra nefa mampihena ny fihoaran'ny lamosina.
Io faucet io dia tena mandaitra satria 50% mahery ny herin'ny rano raha oharina amin'ny ankamaroan'ny faucet Moen izay tsy manana ilay endri-pamoahana Power Clean.
Ny rafitra fampifandraisana Quick Connect dia mahatonga ny fametrahana faucet haingana sy haingana; tsy ilaina fitaovana.
Ny rafitry ny fametrahana Duralock dia mampifandray tsara ny tsipika rano amin'ny dingana iray haingana.
Delta 9113-AR-DST Faucet Sink Kitchen Esink.
Delta 9113-AR-DST Essa Single Handau Pau-Out Kitchen Faucet miaraka amin'ny Magnetic Docking Spout amin'ny Artctic Stainless Steel.
Rafitra fametrahana Duramount
Ahitana tsipika famatsian-solika iray ary valizy voahidy diamondra miaraka amina kapila vita amin'ny diamondra tafiditra ao anatiny, izay manala tanteraka ny famoahana.
Tsy ilaina ny hosotra, manala ny fanaovana tombokase.
Mihodina 360 degre ny spouts miolakolaka be.
Mampihena ny teboka mivoaka izy ireo, mamonjy fametrahana ary maharitra indroa raha toa ka fenitra indostrialy.
Ny andriamby fampidirana mahery dia mametaka tsara ny nock faucet amin'ny toerany.
Rehefa tsy ampiasaina dia mijanona eo amin'ny toerany ilay noza-tsifotra ary tsy hihena rehefa mandeha ny fotoana.
Tafiditra anaty lavaka 1 na lavaka 3. Ahitana takelaka tokontany tsy voatery.
Fantsom-panafody roa-miasa dia mamela anao hiova mora sy ara-dalàna amin'ny tsifotra mankany amin'ny fikorianan'ny rano.
Safidy efatra vita
Hita amin'ny famaranana chrome, vy tsy matevina amin'ny arctic, mainty matte ary varahina Venetiana.
Functionality maoderina kanto
Manangana ny haitao mora tohina amin'ny fiasa tsy misy tanana.
Ny fiatoana fiatoana dia manelingelina ny fikorianan'ny rano avy hatrany, ary mitahiry rano bebe kokoa.
Ny fantsom-paosin-tsolika malefaka dia manome ny fivezivezena betsaka kokoa ary ahemotra tsara amin'ny teknolojia taratra.
Fandidiana maimaim-poana amin'ny MotionSense
Ny teknolojia MotionSense dia mamela anao hampihetsika ny fikorianan'ny rano nefa tsy mikasika ny faucet.
Mametraha zavatra fotsiny eo ambanin'ny spout mba hampihetsika ny fikorianan'ny rano amin'ny alàlan'ny Ready Sensor, na apetraho amin'ny Wave Sensor eo an-tampon'ny spout ny tananao mba hikorianan'ny rano mitohy.
Fandidiana malefaka sy tsotra miaraka amin'ny teknolojia mitaratra
Noho ny teknolojia Reflex, ity faucet ity dia manamora ny asa andavanandro.
Ny fantsom-panafody somary malefaka dia manome efi-trano malalaka handrarana sy hidirana ao anaty rano.
Ny rafitra mpampifandray haingana an'ny orinasa dia mahatonga ny fametrahana ny tsipika rano ho tsio-drivotra.
Duralock dia manafoana ny filàna fitaovana hampifandray ny fantsom-pifandraisana amin'ny faucet, ary manome fanamafisana azo henoina, hita maso ary azo ampiasaina amin'ny fametrahana azy tsara.
Rohy momba ny loharano: WOWOW Faucets ao an-dakozia
Previous :: Inona no marika tsara indrindra amin'ny fauxet an-dakozia? Next: Mampiasa vera ny efitra fandroana hanavahana ny lena amin'ny maina, izay mamiratra sy malalaka